Fiarovan'ny fiarovan-tena any Shina, fikojakojana simika, mpaninjara solika
Description:Anti-friction coating,Coating,Material Coating,Nano ny fiarovan-tena ho an'ny filaharam-be,,
Home > Products > Fitaovana fanodinana solosaina > Nano ny fiarovan-tena ho an&#39;ny filaharam-be
Fiarovana amin'ny fluoro-karbônina
Hydrofluoroether Clean Agent
Fitaovana fanodinana solosaina
Ny vokatra avy amin'ny Nano ny fiarovan-tena ho an'ny filaharam-be , mpanofana manokana avy any Shina, Anti-friction coating , Coating mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Material Coating R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Clean1  Contact Now
Tsy misy volom-borona mangatsiaka ho an'ny sarimihetsika marefo  Contact Now
Tsara ny vokatra tsara indrindra amin'ny sarimihetsika marefo  Contact Now
Kitapom-basy mangarahara fanatontosana ny sarimihetsika Galss  Contact Now
Anti-stain Coatings for Glass Film  Contact Now
Toerana mipetaka amin'ny loko hoditra  Contact Now
AF tsy vita hydrophili amin'ny filalaovana loko  Contact Now
Afangaro afovoan-tavoahangy ho an'ny sarimihetsika marefo  Contact Now
AF Fitrandrahana tsy ara-dalàna ho an'ny sarimihetsika marefo  Contact Now
Fitaovana tsy mitongilana Nano ho an'ny sarimihetsika mahasalama  Contact Now
Clean1 [ P specification] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara...
Tsy misy volom-borona mangatsiaka ho an'ny sarimihetsika marefo
Tsy misy volom-borona mangatsiaka ho an'ny sarimihetsika marefo [ P specification] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny...
Tsara ny vokatra tsara indrindra amin'ny sarimihetsika marefo
Tsara ny vokatra tsara indrindra amin'ny sarimihetsika marefo AF dia karazana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon izay voatahiry Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy...
Kitapom-basy mangarahara fanatontosana ny sarimihetsika Galss AF dia karazana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon izay voatahiry Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy hydrophilic...
Anti-stain Coatings for Glass Film
Anti-stain Coatings for Glass Film AF dia karazana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon izay voatahiry Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy hydrophilic sy tsy lipophilic....
Toerana mipetaka amin'ny loko hoditra
Toerana mipetaka amin'ny loko hoditra AF dia karazana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon izay voatahiry Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy hydrophilic sy tsy lipophilic....
AF tsy vita hydrophili amin'ny filalaovana loko
AF tsy vita hydrophili amin'ny filalaovana loko Nano ny fiarovan-tena ho an'ny filaharam-be dia karazana fiakarana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon voatokana azo avy amin'ny tahiry Resin. Ny fiakaran'ny...
Afangaro afovoan-tavoahangy ho an'ny sarimihetsika marefo
Afangaro afovoan-tavoahangy ho an'ny sarimihetsika marefo Nano ny fiarovan-tena ho an'ny filaharam-be dia karazana fiakarana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon voatokana azo avy amin'ny tahiry Resin. Ny fiakaran'ny...
AF Fitrandrahana tsy ara-dalàna ho an'ny sarimihetsika marefo Nano ny fiarovan-tena ho an'ny filaharam-be dia karazana fiakarana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon voatokana azo avy amin'ny tahiry Resin. Ny...
Fitaovana tsy mitongilana Nano ho an'ny sarimihetsika mahasalama
Fitaovana tsy mitongilana Nano ho an'ny sarimihetsika mahasalama AF dia karazana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon izay voatahiry Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy...
Shina Nano ny fiarovan-tena ho an'ny filaharam-be mpamatsy
Ny fonosana Nano: Tsy manova ny soratra tany am-piandohana; Manana hery mitaona ambony ary mamolavola tanteraka ny molekiola eo amin'ny faritra; Tena tsara tarehy tsara, mangarahara ary ambany tsy fahita firy; Ny tebiteby tery ambony sy ny fiantraikany tsara amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy tsy lipophile; Fanoherana tsara ho an'ny toetrandro sy ny zavatra simika; Fanamafisana ny fifehezana tsara; Toetrany tsara sy maharitra ho an'ny totozy sy ny simika; Kôlônera miova loko miovaova be, mahavariana avo lenta
Anti-friction coating Coating Material Coating Nano ny fiarovan-tena ho an'ny filaharam-be Anti Friction Coating